oranji oranji - SmartMe
Tag archives: oranji
Dom » Galitaanno lagu calaamadeeyay "oranji"
# hello5G - 1G gudaha Orange laga bilaabo Julaay 5
2 Juun 2020
5G si dhakhso ah ayey u soo galay Poland. Shabakad kale oo wareega ayaa macaamiisheeda siin doonta 5G. Waa Orange, waana awoodi karnaa inaan isticmaalno laga bilaabo 1da Luulyo. Waxaa ku jiri doona illaa 5 milyan oo macmiil gudaha 6G ah oo hoos imaadka shabakadda ah ...
Xaaladda Khatarta Cudurka - Guriga joog oo arag sida shirkadaha Poland ay u doonayaan inay na caawiyaan
17 Maarso 2020
inport, coronavirus, orange, ciyaaro, Xanta xun
Coronavirus waa mowduuca koowaad, dhammaanteen waan ognahay arrintaas. Dhawr daqiiqo ka hor Raiisul Wasaaraha ayaa ku dhawaaqay Musiibada. Sidaa darteed, hawl wadeenada (iyo ma aha oo kaliya) waxay go'aansadeen inay na kulmaan. Hubi waxa ay na siinayaan ...
Orange wuxuu hagaajiyaa xawaaraha iyo baaxadda internetka ee 1 metro line
Akhristayaasheena Wanaagsan waxaan u haynaa war aad u wanaagsan. Hadaad macaamiil u tahay Orange ama Nju Mobile, hada wixii ka dambeeya waxaad awoodi doontaa inaad akhrido SmartMe oo aad fiirsato aflaamtayada dhib la'aan.) Orange si weyn ayuu u soo hagaagay ...
Liinta waxay bilaabeysaa ficil weyn - Aynu ka caawinno gigabytes
ololaha sadaqada, orange
Internetka gudaha Poland runti waa raqiis. Had iyo jeer waxaan xasuustaa markii aan aado dibada, inaan kaliya hubin karno inta ay ku kici karto 1 gigabyte oo internetka ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaan ku leenahay jig fara badan macaamiisheenna. Oo ...